tvOS 11 dị ugbu a na mmemme beta ọha nke Apple | Esi m mac
Na WWDC 2017, Apple kwupụtara na ndị ọrụ nke mmemme beta ọha nke Apple nwekwara ike ịmalite ịnwale beta nke sistemụ arụmọrụ Apple TV, tvOS. Dị ka ọ dị na mbụ, Apple wepụtara obere oge mgbe ihe omume ahụ mechara, nke mbụ betas nke sistemụ arụmọrụ ya, mana ruo ụnyaahụ, mmemme beta nke ọha na eze anaghị adị ndụ, opekata mpe n'akụkụ ụfọdụ.
Ekwuru m na obere oge n'ihi na n'oge ahụ ndị ọrụ na-abụghị ndị mmepe nwere ike ịwụnye beta mbụ nke ọha nke iOS 11 yana beta mbụ nke tvOS 11, dị ka Tim Cook kwere nkwa na ihe omume ahụ. Ugbu a MacOS Sierra beta enwere maka ndi oru beta. Ma eleghị anya, a ga-ewepụta ya taa n'ụbọchị niile.
N'oge a Apple nwere ohere ịwụnye tvOS betas nye ndị mmepe, mana afọ abụọ mgbe ọ malitere ịmalite ya ekpebiela na ndị ọrụ niile nke mmemme beta ọha nke Apple na ndị nwe Apple TV, nwere ike ịmalite ịnwale akụkọ niile ga-eweta ọzọ nsụgharị nke tvOS sistemụ arụmọrụ. N'oge nke ihe a na-aga n'ihu ịhapụ usoro beta a bụ Apple Watch, n'ihi na ọ bụ ugbu a agaghị ekwe omume eweda ma ọ bụrụ na anyị adịghị imelite n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ ọ bụrụ na akụrụngwa ngwanrọ adịghị ka o kwesịrị.
Apple agbanweela usoro nke Apple TV betas nwere ike itinyeN'ihi ya, ugbu a ọ bụla onye ọrụ na nkezi ihe ọmụma nwere ike igosi melite. Ruo ugbu a, anyị ga - ejikọ Apple TV na Mac anyị wee budata mmelite ahụ site na iTunes. Site na tvOS 11 usoro a dị mfe karị, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-edebanye aha maka mmemme beta site na NJ nke ngwaọrụ anyị, gaa na ntọala Apple TV ma gaa na mmelite ahụ. N'akụkụ a, nhọrọ ọhụrụ ga - apụta Nweta mmelite nke ọha betas, anyị na - arụ ọrụ ma ọ bụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » tvOS 11 dị ugbu a na mmemme beta ọha nke Apple
Hazie agba nke Philips Hue gị iji gosi otu agba dị ka Mac gị